Maxaa kusoo beegay deeqda Sacuudiga xiligaan ee Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Maxaa kusoo beegay deeqda Sacuudiga xiligaan ee Soomaaliya (dhegayso)
Oktoobar 4, 2017 6:25 g 0
Dowladda Sacuudiga ayaa konton milyan oo doolar ugu deeqday dowladda faderaalka Soomaaliya , xilli ay wali Soomaaliya ku taagantahay mowqifkii dhexdhexaadnimada ee ay ka qaadatay khilaafka dowladaha Khaliijka gaar ahaana isbahaysiga Sacuudiga iyo Qatar.
Raysal wasaaraha dowladda faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay lacagtan ayaa qoraal uu soo saaray waxaa uu ugu mahadceliyay dowladda Sacuudiga deeqda ay siisay Soomaaliya.
“Waxaan si kal iyo laab ah uga mahadcelineynaa Boqortooyada Sacuudiga oo waqtigan baahida loo qabo noogu deeqday 50 milyan oo dollar si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed, taasoo muujineysa sida dalka aan wallaalaha nahay ee boqortooyada Sacuudiga ay u daneynayso ka qeybqaadashada dib u dhiska dalkeena.” ayuu yiri mudane Khayre.
Haddaba dad badan ayaa iswaydiinaya sababta Sacuudiga uu Soomaaliya lacagtaan uu ugu deeqay xiligan iyo siyaasaddiisa Soomaaliya, arrimahaasi ayaanu wax ka waydiinay Diblumaasi Maxamed Caalim oo ka faalooda siyaasadda Geeska Afrika, fadhigiisuna yahay wadanka Finland.
Madaxwayne Farmaajo oo si heer qaran loogu soo dhoweeyey Suudaan (sawiro)
Wasiirka Khayraadka & Shidaalka oo su’aallo laga waydiiyay heshiisyada shidaal ee dalka (dhegayso)